त्यो कार्यालयमा भ्रष्टाचार सदाचार नै बनेको थियो । सेवाग्राहीका कुनैपनि काम दाम बिना हुँदै-हुँदैनथ्यो । कागज हेर्न दस्तुर, मान्छे भेट्न सलामी, फाईल खोज्न दक्षीणा र दस्तखतका लागि नजराना नभै कुनै काम हुँदैनथ्यो ।
हाल सो कार्यालयका हरेक कोठा र हरेक टेबल माथी हरपल निगरानीका लागि स्वचालीत क्यामरा चलेका छन् अनि सेवाग्राहीहरु पनि क्यामरा मुनि नै दस्तुर र दक्षीणा दिन बाध्य छन । यो प्राविधिक प्रयोग पछि परिवर्तन नभएको होईन, परिवर्तन भएकै छ ....जनताहरुले कामको लागि सो कार्यालय धाउँदा उक्त अदृश्य प्राविधिकको समेत भाग थप गरी दस्तुर बुझाउन थालेका छन् ।
gckarki 22/4/10 12:41 PM
दिलिपजी निकै सटीक र विस्तारै हाम्रै देशमा परिवर्तन पछि शुरू हुन लागेकेा कथा जस्तेा लाग्येा । छेाटेा अनि मिठेा लेख्नु भएकेामा मैले त धन्यवाद दिए है ।
Aakar 22/4/10 3:57 PM
जसो गरे, जे गरे पनि ! यति धेरै परिवर्तन भएपछि, कसैको केही लाग्दैन !
वेद नाथ पुलामी 24/4/10 12:14 AM
कुकुर को पुच्छर १२ बर्ष ढुंग्रामा राखे पनि उस्तै भनेको नै यहि हो !
Ashesh 25/4/10 2:30 PM
ha ha ha !! sarai satik kura..
सूर्य/सिकारु 25/4/10 6:40 PM
कथाले अति रोचकपन र यथार्त झल्कायो दिलीप जी, कडक प्रस्तुतिको लागि धन्यबाद !
Surath Giri 26/4/10 12:14 AM
कथा सटिक र सानदर्भिक छ । तर मेरो मनमा लागेको एउटा कुरा । हाम्रा अभिब्यक्ती म सधैं गुनसा हरु मात्र झल्की रखेका हुन्छन् , किन कहिल्यै पनि हामी समाधान का लागि छल्फल गर्दैनौ? मलाई लाग्छ जब सममा हामी त्यस्तो कारयालयको "इन्सेन्टिब " प्रनाली म परिवर्तन ल्यौदैनौ तब सममा केही परिवर्तन हुने वाला छैन । र उक्त प्रनाली ल्याउन का लागि "लिन म्यनेजमेन्ट " को अवधारना ल्याउन जरूरी छ ।
Dhruba Panthi 27/4/10 4:55 PM
हाँस्नु कि रुनु खै, यथार्थ यस्तै छ। दस्तुर बुझाउनुपर्ने चलन हट्नु त कहाँ कहाँ, भाग खोज्नेहरु मात्रै बढेका देखिन्छन् यो वा त्यो बाहनामा।
Anonymous 27/4/10 5:02 PM
केही सीप नलाग्ने भयो, CCTC हेरेर बस्ने को भाग भने धन्न छुट्टाउनु परेनछ
Anonymous 27/4/10 5:03 PM
Jotare Dhaiba 28/4/10 11:17 PM
चोरमाथि चन्डालको थिति यही हो । थिति बिग्रिएपछि परमेश्‍वरको पनि केही लाग्दैन भन्थे, यो कथा पढेपछि अझ हेक्का भयो ।
पूरापूर यही अवस्था त होइन, तर धेरै हदसम्म यथार्थको झल्को दिएको छ खाने विद्याको ।
Anonymous 16/7/10 7:08 PM
यथार्थ यस्तै छ।